Izihlangu ezingaphezulu zeMonsanto (AmaXwebhu) Cwangcisa ukuThoba-Ilungelo laseMelika lokwazi
Izihlangu ezingaphezulu zeMonsanto (amaXwebhu) Cwangcisa ukuDrop
ezaposwa ngomhla Disemba 13, 2018 by UGary Ruskin
Ifemu yezomthetho yeBaum Hedlund Aristei & Goldman, eyadibana ne-The Miller Firm ekubhaleni uloyiso lwembali lommangali u-Dewayne Lee Johnson ngaphezulu kwe-Monsanto ngo-Agasti, ifuna ukutyunjwa kwamaphepha angamakhulu aliqela eerekhodi zangaphakathi zeMonsanto ezafunyanwa ngokufumanisa kodwa ukuza kuthi ga ngoku kugqityiwe ukutywinwa.
U-Baum Hedlund kunyaka ophelileyo wakhupha amakhulu ezinye iirekhodi zangaphakathi zeMonsanto ezibandakanya ii-imeyile, ii-memos, imiyalezo ebhaliweyo kunye nolunye unxibelelwano olunempembelelo kwisigwebo samacala afanayo sokufumanisa ukuba iMonsanto yasebenza "ngolunya" ngokungalumkisi abathengi malunga neenkxalabo zesayensi malunga ne-glyphosate-based herbicides . Imithombo yeJury ithi ezo rekhodi zangaphakathi zazinefuthe kakhulu kwimbasa yabo yokulimala ngezigidigidi ezingama-250 zeedola ngokuchasene neMonsanto, eyathi ijaji kwimeko yanciphisa yaya kuthi ga kwi-39 yezigidi zeedola kwiibhiliyoni ezingama-78 zeedola.
Amagqwetha abamangali kwizilingo ezimbini ezizayo athi iirekhodi zeMonsanto ezingakhange zibonwe esidlangalaleni ngaphambili ziya kuba yinxalenye yobungqina obutsha abaceba ukubazisa kwizilingo.
Namhlanje ikwangumhla wokugqibela wabamangali wokuphendula kwisindululo sikaMonsanto sokuba "sibuyise umva" ityala likaFebruwari 25 elimiselwe iNkundla yeSithili sase-US kwiSithili saseMantla eCalifornia. (jonga u-Disemba 11 ukungena ngezantsi ngeenkcukacha)
I-Monsanto Roundup Trial Tracker IBaum Hedlund Aristei kunye neGoldman, Ifemi yeMiller